Ụbọchị My Pet » Gịnị mere ị kwesịrị ị na-agbalị ịgbanwe gị Guy
Gịnị mere ị kwesịrị ị na-agbalị ịgbanwe gị Guy
Nwere nnọọ ọtụtụ ihe e dere banyere otú ị pụrụ ịgbanwe gị nwoke. Olee otú i nwere ike izu ya na-eme ka ya n'ime nwoke ahụ ị na chọrọ ya ga-. Ma, ka-eme ihe n'eziokwu n'ebe a, ihe e dere mgbe niile okwu na ugbu na o yiri ka ezochi na-okwu-esi nke ndị dị otú ahụ omume. Nke bụ eziokwu bụ na ị na-achọ ịgbanwe a nwoke n'ihi na ọ bụ ezi n'ihi na ị.
Mgbe ị hụrụ n'anya ma ọ bụ n'ezie ka a Ihọd ị na-achọghị ịgbanwe ha. Ọbụna ihe ndị ị kpọrọ asị banyere ya na ị ife banyere ya n'ihi na ha bụ ndị ọcha na-eme ka ya kpọmkwem onye ọ bụ. Ke adianade do ke ogologo-okwu ha ga-ejedebe iwe iwe gị ma ọ bụrụ na ị gbanwee ha. Ma i nwere ike ịta ha ụta? Ga-amasị gị onye na-agbanwe agbanwe na ị lads na now now now? Miri ala n'agbanyeghị ndị anyị bụ na anyị achọghị ọkara hearted ịhụnanya. Ịhụnanya na-dị nnọọ edozi n'ihi na a Ihọd onye na-abụghị nri maka anyị. Na ndị na-ahụ nke a ụdị ịtụnanya (N'ezie ezighị ma ọ bula mmekọrịta nwere ya si oge) n'anya ebe ị pụrụ free, obi ụtọ, nọrọ ná nchebe na ihe ọmụma na ọ hụrụ gị n'anya n'ihi na ị bụ dimkpa. Ha adịghị agbalị gbanwee ihe ahụ mbụ Ihọd ha izute onye ọ bụ. Ha na-echere ha na-ahụ na onye na-agbanwe ha n'ụwa na-enweghị mkpa ịgbanwe onwe ha.
Ịhụnanya bụ ihe ùgwù. Gị mkpa itinye na ihe ị na-atụ anya ga-esi. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọghị ya ịgbanwe gị mgbe ahụ n'aka gị kwesịrị inwe nkwanye ùgwù bụghị ịgbanwe ya. E wezụga ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya n'ezie echiche nke na-agbanwe agbanwe bụla nke ya na-adịghị agafe uche gị. M na-ekwu na ị gaghị ahụ a-adịru ogologo ndụ onye site na iji dum taming / na-agbanwe agbanwe na obibia ma ị gaghị ahụ ezi ịhụnanya na ụzọ. Ya mere, ndị bụ mkpebi gị. Ị chọrọ onye ma ọ bụ onye?